Dad kamid ah Danyarta Hargeisa Oo Shabakada SDWO Qeybteeda Samafalku gaadhsiisay Deeq Lacag ah
SDWO (Hargeisa 05/08/2012) Shabakada Wararka iyo Arimaha Samafalka ee SDWO (SDWO Relief Foundation) ee qeybteeda samafalka aya gaadhsiisay deeq lacaga ah qaar kamid ah danyarta dalka gaar ahaan kuwa ku dhaqan Magaalad Hargeisa.
Deeqdan lacagta ah oo soo sadaqo ah waxa na soo gaadhsiiyey ilaahay ha ka abaal mariyee Axmed Cilmi Kaahin oo degan Maraykanka oo kamid ah Akhristayaasha Shabakada SDWO.COM ayaa waxay ka danbeysay kadib markii dhawaan Shabakadu soo bandhigtay Sawiro muujinaya baahida haysata qaar kamid ah danyarta Hargeisa kuwaas oo u baahan waxtar iyo kaalmo iyo in la afuriyo.
Haddaba waxaa ka soo jawaabey Ninkaas kheyrka badan shaqaystay isagaoo SDWO Relief Foundation soo gaadhsiiyey lacag dhan 150$ boqol iyo konton dollar, lacagtaas ayaa noqotey mid loo qeybiyey sadex qoys oo kamid ah qoysaskaas danyarta ah kuwaas oo kala ahaa Hooyo Indhool ah, Hooyo Goblan ah oo aan awlaad haysan, iyo Hooyo Haysata Gabadh indha la,aan iyo Dhaga la,aan ku dhalatay.
Sadexdan qoys ayaa si aad ah ugu duceeyey Muwaadinka sadaqadan la soo baxay iyagoo Alle uuga baryey inuu jannada ku Abaalmariyo.
Qoysaskan iyo kuwo kale oo badan ayaa dhamaantoodba u baahan kaalmo iyo gacan qabasho fiican
waxaanan ka codsanaynaa dhamaan Akhristayaashayada Sharafta badan iney sadaqada la baxaan bishan barakeysan ee Ramadaana ka faaiideystaan, sidoo kalena ay wax soo taraan dadkooda tabaaleysan.
Hadii aad rabtid inaad SDWO aad ku soo hagaajisid sadaqadaada si aanu halkan ugu soo bandhigno sawirada marka la gudoonsiinayo, waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa samafal@sdwo.com ama Telfoonkada kala ah: 4083333/
SDWO - Xafiiska Samafalka ee Hargeysa